आइतबार अगस्त 8, 2021 |
आइतबार अगस्त 8, 2021
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: व्यवस्था4: 36
“"तिमीहरूलाई शिक्षा दिनको निम्ति उहाँले स्वर्गबाट आफ्नो आवाज सुनाउनु भयो।"”
उत्तरदायी पढाइ: भजनसंग्रह 91 : 1, 9-12, 15
1 तिमी सर्वोच्च परमेश्वरकहाँ लुक्न जान सक्छौ। अवश्य नै तिमी सर्वशक्तिमान् परमेश्वरकहाँ सुरक्षाको लागि जान सक्छौ।
9 किन? किनभने तिमी परमप्रभुमा भरोसा गर्दछौ। तिमीले सर्वोच्च परमेश्वरलाई आफ्नो सुरक्षाको ठाउँ बनायौ।
10 तिमीलाई केही नराम्रो हुनेछैन। त्यहाँ तिम्रो घरमा कुनै प्रकारको रोग हुने छैन।
11 परमेश्वरले तिमीहरूको लागि स्वर्गदूतहरूलाई आज्ञा दिनु हुनेछ, अनि तिनीहरूले तिमीहरूलाई जहाँ जादा पनि रक्षा गर्नेछन्।
12 तिनीहरूका हातहरूले तिमीहरूलाई पक्रनेछन्, त्यसैकारण तिमीहरूले आफ्नो खुट्टा ढुङ्गामा बजार्नु पर्दैन।
15 मेरो भक्तजनहरूले सहयोगको निम्ति मलाई डाक्ने छन्। अनि म तिनीहरूलाई जवाफ दिने छु म तिनीहरूको दुःखको बेलामा साथ रहनेछु, म तिनीहरूलाई मुक्त गर्ने छु र सम्मान गर्ने छु।
1. भजनसंग्रह 143 : 8, 10, 11
2. भजनसंग्रह 34 : 7, 8, 17, 18
7 स1.7परमप्रभुको र्स्वगदूतले जुन मानिसहरूले परमप्रभुको अनुशरण गरे, उनीहरूको चारैतिर छाउनी बनाउँछ अनि तिनीहरूलाई बचाउँछन्। स्वर्गदूतहरूले तिनीहरूको रक्षा गरे।
8 स1. 8 परमप्रभुलाई जाँच गरेर हेर, उहाँ कति असल हुनुहुन्छ। जुन मानिसले उहाँमाथि आश्रय राख्दछ ऊ अवश्य खुशी हुनेछ।
17 स1. 17 परमप्रभुलाई प्रार्थना गर र उहाँले सुन्नु हुनेछ। उहाँले तिमीहरूका सबै संकष्टहरूबाट बचाउनु हुनेछ।
18 स1. 18 जब कष्टले सताँउछ केही मानिसहरू नम्र हुन्छन्। परमप्रभु तिनीहरूको नजिक हुनुहुन्छ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई बचाउनु हुन्छ।
3. उत्पत्ति 15 : 18 (भगवान) (से 3rd ,)
1 सपरमप्रभुले अब्रामसित एउटा सम्झौता गर्नु भयो अनि भन्नुभयो, “तेरा सन्तानहरूलाई यो भूमि दिनेछु।
4. उत्पत्ति 16 : 1,2(म), 4,6(र)-10 (से 2nd ,), 15
1 साराई अब्रामकी पत्नी थिइन्, तर ती दुइ जनाको कुनै सन्तान भएन। साराईकी एउटी कमारी थिई, जसको नाउँ हागार थियो त्यो मिश्रकी थिई।
2 यसर्थ मेरी कमारीसित तपाईंले सहवास गर्नुहोस् अनि म त्यस कमारीबाट जन्मेको नानीलाई मेरो आफ्नै नानी मान्नेछु।अब्रामले आफ्नी पत्नीको सल्लाह माने।
4 हागारले अब्रामको गर्भ धारण गरी। जब उनले चाल पाई उनले गर्भ धारण गरी ऊ घमण्डले फुलिइ अनि अनुभव गरी ऊ साराई उसको मालिकनीभन्दा असल हो।
6 यसर्थ साराईले हागारलाई सजाय दिई अनि हागार भागी।
7 परमप्रभुको र्स्वग दूतले हागारलाई मरूभूमिमा पानीको स्रोतनेर भेटे। त्यो पानीको स्रोत शूर जाने बाटोनिर थियो।
8 स्वर्गदूतले हागारलाई भने, हागार तिमी साराईकी दासी हौ, तिमी किन यहाँ छौ? तिमी कहाँ जाँदैछौ? हागारले भनी, म साराईदेखि भाग्दैछु।
9 परमप्रभुका स्वर्गदूतले हागारलाई भने, साराई तिम्री मालिक्नी हुन, जाऊ फर्केर अनि तिनको आज्ञा पालन गर।
10 स्वर्गदूतले पनि भने, म तिम्रा सन्तानहरू यति सम्म बढाउनेछु तिनीहरूलाई गन्न सकिंदैन।
15 हागारले अब्रामको छोरो जन्माइन अनि अब्रामले छोरोको नाउँ इश्माएल राखे।
5. उत्पत्ति 17 : 1 (भगवान) (से 2nd ,),5(से ;), 15, 19 (से :), 20 (से 3rd ,), 20 (र म), 21 (से 1st ,)
1 ...तिनी सामु प्रकट हुनुभयो। परमप्रभुले भन्नुभयो, “म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ। मसित सही पथ अनुशरण गर।
5 तिम्रो नाउँ अब्राम रहने छैन-तिम्रो नाउँ अब्राहाम हुनेछ।
15 परमेश्वरले अब्राहामलाई भन्नुभयो, म साराईलाई नयाँ नाउँ दिनेछु अनि तिम्री पत्नि साराईको नयाँ नाउँ सारा हुनेछ।
19 परमेश्वरले भन्नुभयो, होइन! मैले भनी सकें तिम्री पत्नी साराले एउटा छोरो जन्माउनेछिन् जसको नाउँ तिमीले इसहाक राख्नेछौ।
20 तैंसे इश्माएलको कुरा गरिस अनि मैले त्यो सुनें। म उसलाई आशीर्वाद दिन्छु। ... र तिनको परिवारहरूबाट एउटा महान् राष्ट्र बनिनेछ।
21 मेरो करार इसहाकसित गर्नेछु।
6. उत्पत्ति 21: 3, 8 (से :), 9, 10, 12 (से 2nd ;), 14 (से :), 15, 17, 18 (से ;), 19, 20 (से 1st ;)
8 इसहाक लगातर बढी रह्यो र चाँडै खँदिलो खाना खान शुरू गर्ने भयो।
10 साराले अब्राहामलाई भनी, त्यो कमारी स्त्री र उसको छोरोलाई खेदि दिनु होस्, तिनीहरूलाई टाढा पठाउनु पर्छ। जब हामी मर्छौ हामीसँग जे छ हाम्रो छोरो इसहाकले पाउनेछ। म चाँहदिन कमारी स्त्रीको छोरो हाम्रा छोरो इसहाकको अंशको हकदार होस्।
12 तर परमेश्वरले अब्राहामलाई भन्नुभयो, त्यो केटा र कमारी स्त्रीको विषयमा तिमी चिन्ता नगर। जे साराले चाहन्छे त्यही गर।
14 अर्को दिन बिहानै अब्राहामले केही खाने कुरा र पानी ल्याए र हागारलाई दिए। हागारले ती कुराहरू लिई अनि आफ्नो छोरा लिएर हिंडी।
17 परमेश्वरले हागारको छोरो रोएको सुन्नु भयो। अनि र्स्वगबाट परमेश्वरका स्वर्गदूत हागार कहाँ आए। उनले सोधे, हागार तिमीलाई के कष्ट छ? परमेश्वरले बालक रोएको सुन्नुभयो।
18 जाऊ, अनि बालकलाई सहायता गर उसको हात समात अनि सगँ-संगै हिंडाऊ।
20 जबसम्म हागारको छोरो ठूलो भएन परमेश्वर ऊसंग नै रहनु भयो।
7. 1 कोरिन्थी2:5(तपाइँको), 9-16
5 तिमीहरूको विश्वास मानिसको ज्ञानमा होइन तर परमेश्वरको शक्तिमा आधारित होस् भनि मैले त्यसो गरें।
15 तर आत्मिक मानिस सबै कुराहरू खुट्ट्याउन समर्थ हुन्छ र अरू मानिसहरूले उसलाई जाँच्न सक्दैनन्। शास्त्रले भन्छः
जब इन्द्रियहरू मौन हुन्छन् आत्मा, परमेश्वर, सुन्नुहुन्छ।
इसाईमतको सिद्धान्त र प्रमाणलाई आध्यात्मिक अर्थले छुट्याउँछ।
आत्माले समझ प्रदान गर्दछ जुन चेतनालाई माथि उठाउँदछ र सबै सत्यमा पुर्‍याउँछ। भजनरचयिता यसो भन्छन्: "उच्च पर्वतमा धेरै समुद्रको हल्ला, समुद्रको शक्तिशाली छालहरू भन्दा शक्तिशाली छ।" आध्यात्मिक ज्ञान भनेको आध्यात्मिक असलको विवेक हो। बुझ्नु वास्तविक र अवास्तविक बीच सीमांकनको रेखा हो। आध्यात्मिक ज्ञान मन, - जीवन, सत्य, र प्रेम प्रकट गर्दछ - र ईश्वरीय भावना प्रदर्शन, ईसाई विज्ञान मा ब्रह्माण्ड को आध्यात्मिक प्रमाण दिन्छ।
यो समझ बौद्धिक होइन, विद्वान् उपलब्धिहरूको परिणाम होईन; यो प्रकाशमा ल्याइएको सबै चीजहरूको वास्तविकता हो।
आत्मा, भगवान, अपरिचित विचारहरूलाई तिनीहरूको उचित माध्यममा जम्मा गर्नुहुन्छ, र ती विचारहरूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ, जसरी उहाँ पवित्र उद्देश्यका पंखुडीहरू खोलिदिनुहुन्छ ताकि उद्देश्य देखा पर्न सक्दछ।
आत्मा शक्ति, उपस्थिति, र शक्ति द्वारा प्रतीकको छ, र साथै पवित्र विचारहरू, प्रेम संग पंखे। उहाँको उपस्थितिमा यी स्वर्गदूतहरू, जसको सबैभन्दा पवित्र चार्ज छ, दिमागको आध्यात्मिक वातावरणमा प्रशस्त छ, र फलस्वरूप तिनीहरूको आफ्नै विशेषताहरू पुन: उत्पादन गर्दछ। तिनीहरूको व्यक्तिगत रूपहरू हामी जान्दैनौं, तर हामीलाई थाहा छ कि तिनीहरूको स्वभावहरू परमेश्वरको स्वभावसँग सम्बन्धित छ; र आध्यात्मिक आशिष्, यसरी टाइप गरिएको, बाह्यकरण गरिएको, तर व्यक्तिपरक, विश्वास र आध्यात्मिक अवस्थित रहेको अवस्था हो।
आत्मा प्रेरित कुलपिताहरूले सत्यको आवाज सुन्नुभयो, र परमेश्वरसँग सजिलैसँग कुरा गर्नुभयो जस्तो कि मानिससँग कुरा गर्छ।
पुरानो भविष्यवक्ताहरूले आध्यात्मिक, अव्यवस्थित दृष्टिकोणबाट आफ्नो दूरदर्शिता प्राप्त गरे, न कि गलत र गलत तथ्यलाई काल्पनिक कथामा भविष्यवाणी गरेर - भविष्यको भविष्यवाणी शरीर र मानव विश्वासको आधारभूत कामबाट। जब विज्ञानमा पर्याप्त रूपले उन्नति भएको भए पनि अस्तित्वको सत्यको अनुरूप हुन, मानिस अनैच्छिक रूपमा द्रष्टा र भविष्यवक्ता बन्छन्, भूत, आत्माहरू वा डेमगोडहरूद्वारा होइन तर एक आत्माले नियन्त्रण गर्दछ। यो सदासर्व, दिव्य मन र यो बिचार संग मिल्छ जुन विगत, वर्तमान, र भविष्य जान्न को लागी प्रिोग्राटिभ छ।
एंजेलहरू। परमेश्वरको विचार मानिसमा लाग्छ; आध्यात्मिक अन्तर्ज्ञान, शुद्ध र सिद्ध; भलाइ, शुद्धता, र अमरत्वको प्रेरणा, सबै दुष्टता, कामुकता, र मृत्यु दरको प्रतिकार।
एन्जिलहरू ईन्टेराइलाइज गरिएको मानव होइन, तिनीहरूका पखेटामा पशुका गुणहरू विकास गर्दै; तर तिनीहरू आकाशीय पाहुनाहरू हुन्, आध्यात्मिकमा उडिरहेका छन्, सामग्री होइन, पियिनस। स्वर्गदूतहरू परमेश्वरबाट शुद्ध विचारहरू हुन्, सत्य र प्रेमको संग पंखमा छन्, तिनीहरूको व्यक्तित्व जस्तोसुकै भए पनि।
मेरा स्वर्गदूतहरू चिहानको ढोकामा देखा पर्दै उच्च विचारहरू छन्, जसमा मानव विश्वासले यसको सुन्दर पार्थिव आशालाई गाडिसकेको छ। सेतो औंलाहरूका साथ तिनीहरू माथि र माथि देखाइन्छ नयाँ र महिमामा भरोसा, जीवनको उच्च आदर्शहरू र यसको आनन्दहरूमा। स्वर्गदूतहरू परमेश्वरका प्रतिनिधि हुन्। यी माथि बढ्ने मानिसहरु कहिल्यै आफूलाई, पाप, वा भौतिकता को लागी नेतृत्व गर्दैन, तर सबै राम्रो को ईश्वरीय सिद्धान्त को मार्गदर्शन, जहाँ हरेक वास्तविक व्यक्तित्व, छवि, वा भगवान को समानता, भेला। यी आध्यात्मिक मार्गनिर्देशनहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर तिनीहरू हामीसँग बस्छन्, र हामी "अनजान स्वर्गदूतहरू" लाई मनोरन्जन गर्दछौं।
भ्रमका ठूला ठूला मनहरू द्वारा लुकेको संसार संसार शैशवको पालनामा सुतेर घण्टाको सपना देख्दै छ। भौतिक ज्ञानले अस्तित्वको तथ्यलाई उदांग पार्दैन; तर आध्यात्मिक ज्ञानले मानव चेतनालाई अनन्त सत्यमा उचाल्छ। मानव भावना पापको भावनाबाट बाहिर बिस्तारै आध्यात्मिक समझमा बढ्दै जान्छ; सबै कुरा ठीकसँग सिक्नको लागि इच्छुक छैन, चर्चजगत्‌लाई सा गलाले बाँध्छ।
मानिस आत्मिक अस्तित्वलाई अनुपातमा बुझ्छ किनकि उसको सत्यता र प्रेमको भण्डार विस्तार भएको छ। मोर्टल्सले ईश्वरभक्त हुनुपर्दछ, उनीहरूको स्नेह र लक्ष्यहरू आध्यात्मिक बृद्धि हुन्छन् - तिनीहरूले अस्तित्वको विस्तृत व्याख्याको नजिक जानुपर्दछ, र असीमको केही उचित अर्थ प्राप्त गर्नुपर्दछ - ताकि पाप र मृत्युलाई हटाइनेछ।
प्यारो पाठकलाई यसको बारेमा सोच्नुहोस्, किनकि त्यसले तपाईंको आँखाबाट भा ग्रा उठाउछ, र तपाईंले त्यसमाथि ढोगेको नरम ढुकुरलाई देख्नुहुनेछ। ज्यादै परिस्थिति, जुन तपाईंको पीडित भावना क्रोधित र दयनीय मान्दछ, प्रेमले एक स्वर्गदूतलाई अनजान मनोरंजन बनाउन सक्छ।
विचारको पाइलाहरू, भौतिक ठाँउ माथि माथि, सुस्त छ, र यात्रुलाई लामो रात पोरडेन्ट गर्दछ; तर उहाँको उपस्थितिका स्वर्गदूतहरू - आत्मिक अन्तर्ज्ञान जसले हामीलाई बताउँदछ कि "रात धेरै बितिसक्यो, दिन नजिकै आएको छ" - उदास भएका हाम्रा अभिभावकहरू हुन्।
एक उच्च र अधिक व्यावहारिक इसाईमत, न्याय प्रदर्शन र बिरामी र स्वास्थ्यमा नश्वरहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्दै, यस युगको ढोकामा खडा भई प्रवेशको लागि ढकढक्याउँछ। के तपाईं नम्रताको चुपचापमा आउँने यो एन्जिल पाहुनाको ढोका खोल्न वा बन्द गर्नुहुनेछ, जुन उहाँ दिउँसो कुलपिताकहाँ आउनुभयो?
वैज्ञानिक सोचको "अझै, सानो आवाज" महाद्वीप र समुद्रको भूमध्य दुर्गम सीमासम्म पुग्छ। सत्यको सुन्न नसकिने आवाज, मानव दिमागमा "सिंहले गर्जेको जस्तो छ।" यो उजाडस्थान र डरको अन्धकार ठाउँमा सुनिन्छ। यसले दुष्टको "सात गर्जन" जगाउँछ, र गोप्य स्वरहरूको पूर्ण डाईपिसन बोल्न तिनीहरूको सुप्त शक्तिहरूलाई उत्तेजित गर्दछ। तब सत्यको शक्ति प्रदर्शन हुन्छ, - त्रुटिको विनाशमा प्रकट हुन्छ।